Video: Twitter na ndụ n'ezie | Martech Zone
Nke a nwere ike ịbụ ihe atụ kasịnụ nke nzuzu Twitter. Echere m na m na-agbaso mmadụ 5,000 n'ihi na otu n'ime 1,000 tweets ọ bụla bara uru. Lelee vidiyo ahụ ị ga-ahụ ihe m hụrụ.
N'agbanyeghị na ara niile ahụ, m ka hụrụ Twitter n'anya! Nke ahụ bụ ebe m hụrụ vidiyo a, n'ezie!
Tags: kọleji ọchịna-akpa ọchị videoọchị ọchịtwitter na ndụ n'ezievidiyo twitter
Onye ofufe Joey Logano
Mee 2, 2009 na 6: 12 AM
Chaị… Abụ m LMAO na nke ikpeazụ ya na nwa agbọghọ ahụ “na-ekpo ọkụ” nọ. Ọ bụ ezie na ọdịdị ihu ya yiri ka ọ na-agụ “ihere…”. tupu o kwuo ihe obula lol.
Jun 29, 2009 na 11: 53 PM
Uzoigwe… nnukwu vidiyo!